Ụlọ ọrụ mmepụta ihe - AOOD Technology Limited
Igwe eji arụ ọrụ na -arụ ọrụ dị mkpa iji nweta nrụpụta dị elu, arụmọrụ dị elu yana ọnụ ahịa dị ala. N'ime sistemụ ụlọ ọrụ ndị a dị mgbagwoju anya, a na -eji mgbakọ mgbanaka mgbanaka na nkwonkwo rotary iji rụọ ọrụ nke ịnyefe ike, data, akara ma ọ bụ mgbasa ozi site na akụkụ kwụ ọtọ ruo n'akụkụ ntụgharị. Dị ka ịdị mgbagwoju nke sistemụ ahụ si dị, enwere ike ijikọ mgbanaka na -amị amị na nkwonkwo rotary.
AOOD enyela sistemụ mgbanaka mmịfe maka igwe nrụpụta ihe ruo ọtụtụ afọ. Nwere ike ịchọta mgbanaka mmịfe AOOD na -arụ ọrụ nnyefe eletriki na eletrọnịkị na igwe ịgbado ọkụ, igwe na -eburu ya na igwe, igwe nkwakọ ngwaahịa, sistemụ njikwa ihe, ogwe aka robotic, semiconductor, karama na ngwa nju, ngwa nri, ngwa nyocha ọkpọkọ, nnwale na -atụgharị. tebụl, ụdị nsogbu, igwe nbipụta na nnukwu igwe ndị ọzọ. Ka anyị jiri robots kọwaa ya nke ọma, robot nwere akụkụ abụọ, otu bụ ogwe aka robotic na nke ọzọ bụ ntọala ntọala.
Ogwe aka robotic nwere ike ịtụgharị 360 ° mana enweghị ntọala etinyere yana ọ dị anyị mkpa ịnye ike na akara site na ntọala ruo na ngalaba njikwa ogwe aka robotic. N'ebe a, anyị ga -eji mgbanaka mmịfe iji dozie nsogbu a na -enweghị nsogbu eriri.
AOOD na -eme nyocha mgbe niile ma na -emepụta usoro mgbanaka mgbanaka ọhụrụ. AOOD mpịakọta na mgbaaka na-anaghị akpọtụrụ nwere ike nweta nnyefe a pụrụ ịdabere na ya ogologo oge n'okpuru nnukwu ọsọ, Mercury ịkpọtụrụ mgbanaka mgbanaka nwere ike nweta mbufe dị ugbu a dị oke elu, dị ka njikọ AOOD 3000amp eletriki maka igwe ịgbado ọkụ.
Ngwaahịa emetụtara: Site na Bore Slip Rings, Mpekere Pancake Slip Rings,Mgbaaka Mwepu Sistemụ Servo